निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - कुन चाँहि मूल्यवान छ? - गेमि।
त्यसोभए तपाईले स्विच किन्न चाहानुहुन्छ, तर कुन संस्करण किन्नु पर्छ - स्विच बनाम स्विच लाइट?आजको विशाल कम्पनीहरु बीच कडा प्रतिस्पर्धाको समयमा, निन्टेन्डो केही फरक बाहिर तान्न सक्षम छ। पोर्टेबल गेमि,, राम्रो पुराना दिनहरू फिर्ता ल्याउँदै। रमाइलो अंश अब तपाईं पोर्टेबल उपकरणमा धेरै जसो AAA शीर्षकहरू खेल्न सक्नुहुन्छ।
चिन्ता नलिनुहोस्, यस लेखमा हामी तपाइँले किन्नु पर्ने सबै कारणहरू हुँदै जानेछौं, र अन्तमा हामी विजेता घोषित गर्नेछौं।
तपाईंलाई थाँहा थियो? निन्टेन्डो स्विच २ - रिलिज मिति, चश्मा र लीक
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - आकार तुलना
१. आकार तुलना तुलना गर्नुहोस्
सोनीको PS5 र Xbox श्रृंखला जस्ता अन्य विशाल कन्सोलहरूको तुलनामा, X निन्टेन्डो स्विच आश्चर्यजनक रूपमा यसको ट्याब्लेट जस्तो आकारको प्रयोगकर्ताहरूलाई हल्का प्याक गर्न सक्छन् र ठूलो बक्स वरिपरि बोक्नको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। दुर्भाग्यवस, स्विच त्यति सानो छैन कि तपाई यसलाई आफ्नो जेबमा बोक्ने वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ; तपाईं केस लिन सक्नुहुन्छ वा टेबलमा डक गर्न चाहनुहुन्छ।
२. स्विच लाइट तुलना
स्विच लाइट मानक मोडल भन्दा सानो छ तर पर्याप्त मार्जिनले होईन। यो 720p दृश्य फलाउन अनुमति दिन पर्याप्त ठूलो छ, र नामले देखाउँदछ, यो मानक स्विच भन्दा कम तौलको छ। कन्सोल अझै पनी यो पूर्ववर्तीको हेफ्ट नगरीकन तपाईको हातमा सहज महसुस गर्दछ। त्यसमाथि, लाइट कुनै पनि पकेटमा फिट हुन पर्याप्त सानो छ।
सर्वश्रेष्ठ Minecraft छाला विचारहरु
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - दृश्यहरू
१. निन्टेन्डो स्विच दृश्यहरू:
हामी सबै चाहन्छौं कि हाम्रो खेलहरू उनीहरूले सकेसम्म राम्ररी हेर्न सकुन्, र यसले resolution के रेजोलुसनलाई समर्थन गर्दैन, स्विचले खेललाई दुई फरक तरिकाले जीवनमा ल्याउँदछ। जब ह्यान्डहेल्ड मोडमा हुन्छ, कन्सोलले p२०p सम्मको स्क्रिन रिजोलुसनलाई समर्थन गर्न सक्छ, जुन निन्टेन्डोको अघिल्लो ह्यान्डहेल्डहरू भन्दा उल्लेखनीय छ। जे होस्, खेलहरू एक पटक स्विच यसको डकमा संगठित भएपछि धेरै इमर्सिभ हुन्छ। एक अनमोल 1080p रिजोलुसनको साथ, निन्टेन्डोको भव्य विश्व जीवनको लागि विस्तृत रूपमा स्प्रि। गर्दछ।
२. स्विच लाइट भिजुअलहरू
यदि तपाईं दृश्यमा ब्युष्टको बारेमा वास्ता गर्नुहुन्न र अझै स्विच चाहनुहुन्छ भने, हुनसक्छ तपाईंले लाइट प्राप्त गर्नुपर्नेछ। निन्टेन्डो स्विच लाइटले प्रदर्शन गर्न सक्ने उच्चतम रिजोलुसन 720p हो। प्रणालीले टिभी मोडलाई समर्थन गर्दैन, जबकि मानक मोडलले गर्दछ। यसको विपरित, खेलहरू ह्यान्डहेल्ड मोडमा पर्याप्त राम्रो देखिन्छ। त्यहाँ ठूलो स्क्रिनमा अनुभव गर्न लायक केहि शीर्षकहरू छन्। त्यसैले चित्रमय गुणवत्ता मा घाटा न्याय गर्न को लागी एक कडा गाह्रो छ।
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - मूल्य युद्ध
स्विच मूल्य निर्धारण -
कन्सोल धेरै मूल्यवान हुन सक्छ, र स्विच पक्कै पनि यसको अपवाद छैन। मानक मोडेलको एक मोटा मूल्य ट्याग होल्ड गर्दछ300 अमेरिकी डलर, जुन यसको प्रतिस्पर्धीहरू, Xbox र प्लेस्टेशनको रूपमा समान मूल्यको आसपास छ। कठिन यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि स्विच एक घर कन्सोल र एक ह्यान्डहेल्ड दुबै हुन सक्छ, तब यो एकदम सम्झौता हो।
स्विच लाइट योजना -
यदि तपाईं केहि पैसा बचत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने। तपाईले खोज्नु भएको विकल्प स्विच लाइट हुन सक्छ। दुर्भाग्यवस, लाइट केहि बलिदानको साथ आउँदछ। को२०० अमेरिकी डलरमूल्य ट्याग बजेटको लागि धेरै अनुकूल छ, तर तपाईं आफ्नो पैसाको लागि धेरै धमाई पाउँनुहुन्न। लाइटमा छुट्न मिल्ने आनन्द-कन्स छैन र यसको सट्टामा तिनीहरूलाई कन्सोलमा निर्मित गरिएको छ, त्यसैले तपाईं व्यावहारिक रूपमा केवल एउटा कन्ट्रोलर पाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग केहि खेलहरू खेल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले दुई आनन्द-प्याक प्याकहरू खोज्नु पर्छ। तिनीहरूलाई खरीद गरेपछि, तपाईं लगभग समान पैसा खर्च गर्नुभयो जुन तपाईं मानक स्विचमा खर्च गर्नुहुनेछ।
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - ब्याट्री जीवन
ब्याट्री लाइफ स्विच गर्नुहोस् -
यस्तो युगमा जहाँ पोर्टेबिलिटी नै सबकुरो हुन्छ, ब्याट्री जीवन पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केहि एक घण्टा दुई खेल मात्र एक सानो ब्याट्री सूचना संग पूरा गर्न को लागी खेलाउनु भन्दा बढी कष्टप्रद छ। सुरुमा, मानक स्विचको असाधारण ब्याट्री जीवन थिएन। यो साढे दुई देखि साढे छ घण्टा सम्म चलिरहेको थियो। भाग्यवस, निन्टेन्डोले जुलाई र अगस्ट २०१ August बीच मानक मोडेलको नयाँ संस्करण राख्छ जुन लामो ब्याट्रीको जीवनमा घमण्ड गर्दछ। यो साढे चार देखि पूरै नौ घण्टा बीचमा हुन्छ। पूरै दिउँसो बस्नको लागि पर्याप्त समयको लागि यो खेलको समय हो।
स्विच लाइट ब्याट्री जीवन -
फेरि, एक लाइट प्राप्त सबै तपाईं आफ्नो समय गेमि spend कसरी खर्च गर्नेमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ सामान्यतया मासिलो खेलको माध्यमबाट दिउँसो दिउँसो दिउँसो खर्च गर्नुहुन्न भने, त्यसो भए तपाईले लाइटको ब्याट्री जीवनमा आपत्ति नमान्नु हुनेछ। तीन देखि सात घण्टामा क्लक गर्दै, लाइटमा मानक स्विच भन्दा सानो समय फ्रेम छ, तर यो मूल मोडेल भन्दा अलि राम्रो छ। भनिएको छ, एक लाइट तपाईं को लागी सबै भन्दा राम्रो छ, जो आगो को प्रतीक तीन घर को रूप मा केहि तल चगाउन विस्तृत घण्टा खर्च गर्दैन। यो लामो कार सवारीको लागि राम्रो हुन सक्छ वा यदि तपाईंलाई एक वा दुई घण्टा मार्न आवश्यक पर्दछ। यो सबै व्यक्तिगत प्राथमिकतामा फोडा हुन्छ।
निन्टेन्डो स्विच बनाम स्विच लाइट - पोर्टेबिलिटी तुलना
पोर्टेबिलिटी स्विच गर्नुहोस् -
यो कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं आफैं आफैं स्विच खेल्नुहोस्, र एक अपरिचित व्यक्ति आउँछन् र तिनीहरूले खेल्न सक्छन् भने सोध्छन्। खुशी-दुबै हटाउन योग्य भैरहेको लागि धन्यवाद, तपाईं ती मध्ये एक अपरिचितलाई हस्तान्तरण गर्नुहोस् र तिनीहरू जानु अघि केही रोयिंग गेमहरूको आनन्द लिनुहोस्। यो स्विच को सब भन्दा महत्वपूर्ण बिक्री बिन्दु मध्ये एक थियो। हुनसक्छ धेरै कारणले एउटा व्यक्ति समातेको कारण मुख्य कारण। दुई कन्ट्रोलरहरू कि एकलको रूपमा दुगुना जस्तो कि त्यो पर्याप्त राम्रो थिएन। मानक स्विचले किकस्ट्यान्ड समावेश गर्‍यो, त्यसैले तपाईं कुनै पनि कुराको बिरूद्ध प्रपोस नगरीकन कन्सोल सेट गर्न सक्नुहुनेछ। कती राम्रो छ ?.
स्विच लाइट पोर्टेबिलिटी -
दुर्भाग्यवश, यो त्यहि हो जहाँ लाइट ईम्प्रेस गर्न असफल हुन्छ। हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, कन्सोलमा आनन्द-विपत्तिहरू निर्माण गरिएका छन्। यो एक क्षणको सूचना मा अन्य संग खेल्न यो धेरै गाह्रो बनाउँछ। यसको शीर्षमा, अन्तर्निहित आनन्दहरूले केहि खेलहरू बनाउँदछन् जस्तै स्निफर क्लिफहरू र सुपर मारियो पार्टी व्यावहारिक रूपमा प्ले गर्न नसकिने। जबकि लाइटले नियमित कन्सोलमा जोड्नको लागि आनन्द-विपत्तिलाई अनुमति दिँदछ, प्रणालीमा किकस्ट्यान्डको अभाव छ। यसको मतलब तपाईंले फ्लैट सतहमा लाइट-खेल्नु पर्छ। वा केहि बिरूद्ध पप अप। अर्को शब्दमा, सेट अप एक समस्या हो। तपाईं लाइटको साथ चार्ज डक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न किनकि यसले TV मोड समर्थन गर्दैन। दुर्भाग्यवश, स्विच लाइटले के मिस गर्‍यो भन्ने कुराले स्विच हुनै पर्छ।
आकार विजेता -स्विच लाइट
दृश्य विजेता- स्विच गर्नुहोस्
मूल्य विजेता- लाइट स्विच गर्नुहोस्
ब्याट्री लाइफ विनर- स्विच गर्नुहोस्
पोर्टेबिलिटी विनर- स्विच गर्नुहोस्
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, निन्टेन्डो स्विच स्पष्ट विजेता हो। सबै पक्षमा, निन्टेन्डो जीत गर्न सक्छन्; जे होस् स्विच लाइट एक अपेक्षाकृत कम मूल्य हो, स्विच धेरै फाइदाजनक छ। तपाईं अझै पनि लाइट प्राप्त गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ? वा हामीले तपाईंलाई मानक स्विचमा बेचे। हामीलाई जानकारी दिनुहोस् कि तलको टिप्पणीहरूमा जान तपाईंलाई कुन मोडेलको योजना छ।
ट्विच प्राइम फ्री गेम (२०२०)
नि: शुल्क र्याप बीट्स कसरी बनाउने
विन्डोज १० को लागी नि: शुल्क आईओएस इमुलेटर
नि: शुल्क फिल्महरू डाउनलोड गर्न उत्तम ठाउँ
मलाई तपाईका बारे के रुचि छ
म कसरी मेरो म्याकबुक प्रो मा नेटफ्लिक्स प्राप्त गर्छु
डाउनलोड बिना नै एल्बम अनलाइन सुन्नुहोस्
आफ्नै मिनीक्राफ्ट छाला बनाउनुहोस्